Dominique Mbonyumutwa - Wikipedia
I Dominique Mbonyumutwa dia mpanao pôlitika roandey izay lasa filohan'ny Repoblikan'i Roanda tamin'ny 28 Janoary 1961 hatramin'ny 26 Ôktôbra 1961. Teraka tamin'ny 1921 tao Mwendo ao Roanda izy ary maty tamin'ny 26 Jolay 1986 tao Grand any Belzika.
1.1 Fiaviany sy fianarana nataony
1.2 Asa nataony
1.4 Filohan'ny Repoblika voalohany
Fiainany[hanova | hanova ny fango]
Fiaviany sy fianarana nataony[hanova | hanova ny fango]
Teraka tao Mwendo tamin'ny taona 1921 i Dominique Mbonyumutwa. Maty ny rainy (izay nanompo tao amin'ny tompomenakely totsy) fony izy valo taona. Tsy nety nisolo an-drainy tamin'ny fanompoana izy satria mbola te hianatra. Tezitra noho izany ilay tompomenakely ka naka ny ny biby fiompin'ny fianakavian'i Dominique Mbonyumutwa izay nifanekana ho takalon'ny fanompoana. Taorian'ny fahavitany ny fianarana ambaratonga voaloany dia niditra tao amin'ny des Frères Joséphites tao Kabgayi izy. Nahazo ny diplôma ahazoa-mampianatra izy taorian'izay.
Asa nataony[hanova | hanova ny fango]
Nanomboka ny asa fampianarana tao Kamonyi ao aminn'ny faritra Rukoma izy tamin'ny taona 1941. Tao no nanambadiany an'i Sophie Nyirabuhake tamin'ny taona 1941, izay niterahany zaza fito. Voaray hampianatra ny zanak'ireo vazaha tao amin'ny orinasa mpitrandraka harena an-kibon'ny tany (Somuki) tao Rutongo-Mugambazi izy taty aoriana. Nampianatra tao amin'ny paroasin'i Muyunzwe ao Mwendo-Kabagali (tanàna nahaterahany) izy nanomboka tamin'ny taona 1946. Niditra niasa tao amin'ny fandraharaham-panjakana belza tao Gitarama izy tamin'ny taona 1947.
Tamin'ny taona 1952 i Dominique Mbonyumutwa dia niaka-boninaitra ho sous-chef izy tao Ndiza. Tamin'ny 30 Ôktôbra 1959 dia nampiantsoin'ny lehibey (chef) hankany Gitarama i Dominique Mbonyumuitwa mba hiatrika fivoriana. Rehefa tonga tao izy dia naheno fa tsy misy izany fivoriana izany. Henony tamin'ny namany fa mety vela-pandrika izany.
Tamin'ny 1 Novambra 1959 dia nisy andian-jatovo mpomba ny fitondrà-mpanjaka tonga nanao herisetra taminy satria nikasa hanongana ny mpanjaka hono izy. Nandositra ny vady aman-janany. Afaka namaly sy nitsangana ka niala teo ihany izy. Niely anefa ny resaka fa maty izy. Izany zava-nitranga no nampipoaka ny korontana manerana an'i Roanda (afa-tsy tao Cyangugu sy Kibungo) izay atao hoe "revôlisiona roandey".
Filohan'ny Repoblika voalohany[hanova | hanova ny fango]
Notendren'ny governoran'i Roanda-Orondy (Ruanda-Urundi) ho mpikambana ao amin'ny Conseil spécial provisoire ("Filankevitra manokana vonjimaika") tao amin'ny mpanjaka Kigeli V izy tamin'ny 6 Febroary 1960.
Tamin'ny 26 Ôktôbra 1960, taorian'ny fifidianana ireo tompon'andfraikitra amin'ny kaominina, dia natsangana ny governemanta vonjomaika notarihin'i Grégoire Kayibanda, ka isan'ny voatendry hisahana andraikitra ambony tao amin'ny Fiarovana i Dominique Mbonyumutwa. Tamin'izany fotoana izny dia isesy tany ny mpanjaka Kigeli.
Tamin'ny 28 Janoary 1961 dia nisy kôngresy nataon'ny mpanohitra roandey tao Gitarama, nanjakan'ny Parmehutu (antoko maro an'isa izay naha lohandohany an'i Dominique Mbonyumutwa), izay naongana ny fitondrà-mpanjaka tokana totsy. Nambara ny fitsanganan'ny Repoblikan'Antenimiera ary lany ho filohan'ny Repoblika izy.
Nametra-pialana amin'ny maha filohan'ny Repoblika azy izy tamin'ny 26 Ôktôbra 1961 rehefa novana ho fitondrana ananan'ny filoham-pirenena fahefana lehibe ny Repoblika, izay ahitana ny piraiminisitra (lehiben'ny antokon'ny maro an'isa) misahana koa ny andraikitry ny filohan'ny Repobllika. Tonga Repoblika amin'izay i Roanda. Voatendry hisahana toerana ambony tao amin'ny Fitsarana izy taorian'izany.
Lany ho solombavam-bahoaka izy tamin'ny taona 1965. Tamin'ny taona 1968 izy dia nandao ny antoko MDR-Parmehutu, izay tsy nankasitraka ny fiampangan'izy ireo ny governemantan'i Kayibanda ho anjakan'ny kolikoly, izy sy ny namany maro hafa.
Tamin'ny taona 1978 dia voatendrin'ny filoha Juvénal Habyarimana ho chancelier des ordres nationaux izy ary tao izy hatramin'ny 23 Jolay 1986 nahafatesany.
Fahafatesany[hanova | hanova ny fango]
Maty tao amin'ny hôpitalin'ny oniversite tao Grand any Belzika i Dominique Mbonyumutwa rehefa notsaboina tany. Notsenaina tamin'ny fomba manetriketrika ny vata-mangatsiakany. Tamin'ny 1 Aogositra 1986 dia notanterahina ny fandevenana azy tany Roanda teo ambany fanapahan'i Juvénal Habyarimana. Nalevina tao amin'ny stade de la Démocratie ("kianjan'ny Demôkrasia") ao Gitarama, izay nanambaràny ny faharavan'ny fanjakà-mpanjaka tompomenakely sady nanambaràna ny maha filohan'ny Repoblika voalohay azy, izy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Dominique_Mbonyumutwa&oldid=996839"
Voaova farany tamin'ny 8 Septambra 2020 amin'ny 11:07 ity pejy ity.